बाल्मिकी र एडभेन्चर एक्पर्ट स्कुल क्रिकेटको फाइनलमा | Hamro Khelkud
बाल्मिकी र एडभेन्चर एक्पर्ट स्कुल क्रिकेटको फाइनलमा
भरतपुर – एक्पर्ट स्कुल क्रिकेट लिग चितवनको उपाधिका लागि भरतपुरका बाल्मिकी शिक्षा सदन र एडभेन्चर इंग्लिस स्कुलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बाल्मिकीले भरतपुरको सनराइज इंग्लिस स्कुललाई ३९ रन ले एडभेन्चरले कल्याणपुरको स्मल हेभन स्कुललाई २८ रनले हराउँदै एकअर्कासँगको भेट पक्का गरेका हुन् ।
विशाल चोकस्थित नौ बिगाहा मैदानमा ८४ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको सनराइज १२. ३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र ४४ रन बनाउन सक्यो । सनराइजका आशिष वंशीले १० रन बनाउनु बाहेक कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । बाल्मिकीका मनीष थापाले ३ तथा अनुराग सुवेदी र सुजन भट्टराईले समान २ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बाल्मिकीले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाउदै ८३ रन बनाएको थियो । टोलीका समिर अधिकारीले १५, विप्लव गुरुङ र मनीषले समान १२ रन बनाए । सनराइजका आशिष लम्सालले ४ र सुलभ बरालले ३ विकेट लिए । बाल्मिकीका मनीष म्यान अफ दी म्याच घोषित भए ।
अर्को सेमिफाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको एडभेन्चरले १८. ३ ओभरमा अलआउट हुदै १ सय १२ रन बनाएको थियो । एक समय २३ रनमा ४ विकेट गुमाएको टोलीले पछि अवस्थामा सुधार गरेको थियो । एडभेन्चरका आकाश गुरुङले २५, पर्वत श्रेष्ठले २३ र सन्देश राना मगरले १८ रन बनाए । स्मल हेभनका लागि सचिन सिंहले ४ र कप्तान विधान देवकोटाले २ विकेट लिए ।
१ सय १३ रनको लक्ष्य पछ्याएको स्मल हेभनले १४.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ८४ रनमात्र जोड्न सक्यो । टोलीका अमित यादवले १५, रितिक यादव ११ र विधान देवकोटाले १० रन जोडे । एडभेन्चरको जितमा प्रयास गौतमले एक्लैले ६ विकेट लिए । उनले ४ ओभर २६ रन खर्चिए । प्रयास नै खेलको म्यान अफ दी म्याच घोषि भए ।
दर्शकमध्येबाट सुरुची बोहोरा लक्की ड्रमार्फत एक्सपर्ट फ्यान अफ द डे को घोषित भइन् । उनलाई मुख्य प्रायोजक एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेसले २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्यो ।
चितवन र आसपासका १० विद्यालयको सहभगिता रहेको प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार हुनेछ । हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी, काठमान्डौले आयोजना गरेको स्कुल क्रिकेटलाई एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेस मुख्य प्रायोजन गरेको छ ।